Shiinaha 5263 3-Marxalad oo ku hoos jirta Nidaamka Nidaamka 'Osmosis System' ee Sink Tankless Household Reverse Osmosis System iyo soosaarayaasha | Filter Tech
Shaandhaynta Guriga Oo Dhan
Sifeynta Jikada & Musqusha
Nidaamka Sifeeyaha Qasabadda
Nidaamka Shaandhaynta Qubeyska
5263 3-Marxalad oo Hoostagta Nidaamka Osmosis-ka ee Guryaha Daba-dhilif ah
Nidaamku wuxuu si wax ku ool ah uga saari karaa wasakheynta badankeeda oo ay ku jiraan TDS, biraha culus, bakteeriyada ku jirta biyaha tuubadaada.
Maaddada balaastigga ah ee heerka cuntada ah waxay hubisaa biyo cabitaan saafi ah oo aan wasakh lahayn.
Hal mar oo kaydadka shaandhada la iska tuuro ah ayaa kaa badbaadin kara waqtigaaga nadiifinta oo ka fogow wasakheynta labaad.
2 ka mid ah 1 kaydadka shaandhada is haysta, keydso booskaaga hoosta hoosteeda oo ay fududahay in la beddelo curiyaha.
Sifee muujinta nolosha oo dib u dhig, si fudud u hubi goorta saxda ah ee la beddelayo shaandhadaada.
Nadiifinta Biyaha RO ee Qiimaha Leh Guriga
Sifeynta wejiga 3-da weel waxay soosaartaa biyo macaan, biyo saafi ah tooska tubada jikadaada, kana sahlan uguna habboon bey'adda inta badan biyaha dhalada ku jira. Waxaad ku raaxeysan laheyd biyo saafi ah, baraf cad cad, kafee cusub iyo cunno dhadhamin fiican.
Muuqaal Muuqaal-Waqti-Gaaban ah
Sifeeyaha biyaha ee RO-ga ah wuxuu leeyahay bandhig-waqtiga-dhabta ah oo kaa caawinaya inaad u ilaaliso tayada biyahaaga hab ku habboon, sida TDS ee biyaha la sifeeyo, tilmaame isbeddelka shaandhada, iwm, muuqaal runtii caqli-gal ah oo kaa caawin doona kor u qaadista khibradaada isticmaale.
Naqshad Taangiga ka yar
Nidaamkan osmosis-ka ee is-beddelka leh wuxuu la yimaadaa jirka aadka u khafiifka ah iyo qaabeyntiisa ayaa loo maleynayaa inuu la qabsan karo qaab guri kasta. Si ka duwan inta badan unugyada 'RO', waxay soo bandhigeysaa naqshad aan habeyn lahayn waxayna kuu abuuri kartaa meel jikada kuugu habboon.
Qaloocin iyo Jiid Naqshad
Iyada oo si fudud loo leexiyo, beddelka shaandhada ee miiraha biyaha RO si fudud ayaa loo samayn karaa iyada oo aan laga badin ama ka daadato. Uma baahnid inaad damiso biyaha soo galaya ama aad qalabka u qaadatid sidii mid dhaqameed.
Rakibaadda fudud iyo beddelaadda
Miirahaani biyaha RO wuxuu la yimaadaa miirayaasha la iska tuuri karo ee miirayaasha qaabka, si fudud kuugu filan inaad ku rakibto oo aad ku beddesho miirayaasha sida aad rabto. Xirfadeena tiknoolajiyada joogsiga biyaha ee laba-geesoodka ah ee loogu talagalay khaanadaha shaandhaynta ayaa ah caawimaad weyn oo ku saabsan ka hortagga biyaha ka soo baxaya kaydadka, markaa uma baahnid inaad damiso biyaha soo galaya markaad leexsanayso.
Waxqabad sare oo leh 3 marxaladood
Marxaladda 1aad: CF waxaa ku jira PP iyo CB. Sifeeyaha faleebada (PP) (10-15μm) wuxuu qaadi karaa midab, daaq, miridhku, qaybo waaweyn iyo wasakhda la joojiyey; Xaddiga Kaarboonka (5-10μm) wuxuu ka saari karaa koloriin haraaga ah (-85%) iyo COD (≥25%);
Marxaladda 2aad: Xuubka RO (0,0001μm) wuxuu dhexgelin karaa ion adag oo kala daadsan sida biraha culus, iyo noolaha sida bakteeriyada coliform. Qiyaasta macaanku waa> 95%. Waxaan haysannaa 75G, 400G, 500G iyo 600G oo aan kala dooran karno. Toray iyo Dow labadaba waa la heli karaa.
Marxaladda 3aad: Kaarboonka dhajiska ah (10-15μm) wuxuu ka saari karaa koloriin haraaga ah, kaarboon tetrachloride, methane oo leh heerka ka saarista illaa 85% geeddi-socodka oo dhan, wuxuuna ka saari karaa biyaha midabada, urta iyo dhadhanka xun. Kaarboonka bakteeriyada lidka ku ah waa ikhtiyaari si loo joojiyo koritaanka bakteeriyada.
Shayga RO3A-75E / M
Qulqulka qulqulka 0.2L / daqiiqo G 75G）
1L / daqiiqo （400G）
Cabbir RO3A 445 × 130 × 420mm
Heerkulka shaqada 5-38 ℃
Cadaadiska shaqada 0.1-0.4Mpa
Xiriirinta Gelitaanka: 3/8 ″ Tuubooyinka PE water biyo saafi ah iyo biyaha qashinka: 1/4 ″ Tuubo PE ah
Warbaahinta shaandhee CF (PP + scale inhibitor CB) + RO + CB (bakteeriyada la heli karo)
Astaamaha - E (nooca dhaqaalaha) Sifee muujinta noloshaada oo dib u dhig; ilaalinta saacadaha shaqada; qasabad caadi ah
Astaamaha - M (nooca dhamaadka-dhamaadka) Sifee muujinta noloshaada oo dib u dhig; ilaalinta saacadaha shaqada; qasabad caqli badan; Bandhigga TDS; ilaalinta baxsiga biyaha; nadiifinta caqliga; habka fasaxa
Hore: 5262 3-Marxalad oo ku hoos jirta Nidaamka 'Osmosis System Reverse Osmosis'
Xiga: 5264 3-Marxalad oo ku hoos jirta Nidaamka 'Osmosis System Reverse Osmosis'
Nidaamka Sifeynta Biyaha ee Osmosis ugu Fiican
Nidaamka Osmosis ee Dib u Dhaca
Nidaamka Osmosis-ka ee Guryaha
Nidaamka Osmosis ee Guryaha oo Buuxda
5265 2-Marxalad oo ku hoosjirta 'Reak' Qoyska React Compact ...
5673 Countertop Ultrafiltration Daaweynta Biyaha ...
5268 2-Marxalad oo Hoos Yimaada Qoyska Reexda Osmos ...
5264 3-Marxalad oo Hoos Yimaada Qoyska Reejiya Osmos ...
5210/5211 3-Marxalad oo kujirta 'Ultrafil' Qoyska Guryaha ...
5262 3-Marxalad oo ku hoos jirta Osmosi Dib-u-dhiska Guryaha ...
302-308, Siming Industrial Park, Tong'an Industrial Urursashada Degmada, Xiamen, Shiinaha.
La soco shaandhadayada biyaha 129t ...
Soo ogow waxa ka socda Thailand
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay. Alaabada Featured, Khariidadda bogga
Sifeeyaha Biyaha Guriga Oo Dhan, Sifeeyaha Biyaha Gudaha, Isticmaalayaasha Daaweynta Biyaha, Nidaamka Sifeynta Biyaha ee Osmosis ugu Fiican, Kaydadka Beddelaha Filterka Biyaha, Nidaamka Osmosis ee Guryaha oo Buuxda,